Mbola mivazavaza an’efitra aloha i James Ratsima hatreto - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanambara mazava ny ambasadoro frantsay, Vouland-Aneini, izay monina sy miasa eto Madagasikara fa an’i Frantsa ireo Iles Eparses. Tao amin’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra izy no nilaza izany. Avy namangy ny Ben’ny tanàna ary namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety izy.
Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa mba hafahafa ihany tokoa ny nahatonga ny fanontaniana nipetraka ao amin’io toerana io. Toa fanontaniana efa nomanina ary baiko hoe apetraho ao io. Toa fanontaniana hi-piéger-na an’ilay ben’ny tanàna no tanjona. Kinanjo, izao ny Malagasy iray manontolo no voapaingotra tao fa tsy ilay ben’ny tanàna irery. Ilay ben’ny tanàna mantsy malaza fa tsy tia frantsay kanefa dia nandray ny ambasadaoro frantsay ary isan’ny manam-pahefana noraisiny voalohany ny solontenan’i Frantsa. Tsetsatsetsa tsy aritra tokoa izany.
Misy ireo Malagasy namaly bontana avy hatrany. Isan’ny niaka-pofona i James Ratsima. Efa nampoizina ihany ny fihetsiny. Nivazavaza irery tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao aloha izy. Nitady namana ihany anefa izy avy eo. Tsy fanaony loatra izany. Nitodika tamin’ireo depiote ny tenany. Fantatra anefa fa tsy dia manohana an’ireo olom-boafidy ireo loatra izy. Voatery satria maivana ihany raha izy irery no hivazavaza eo. Maivana tokoa ary tsaroana etoana ilay kandida ho filoham-pirenena niakatra teny Ambohitsorohitra nitondra sora-baventy. Zara lasa fiohmehezana izy na dia kandida aza. Nahatsiaro izany angamba i James Ratsima ka nitady namana manana voahosotra (légitimité).
In’efatra sahady taorian’ny fanambarana nataon’ilay ambasadaoro frantsay no niaka-tsehatra i James Ratsima. Ny 29 okitobra dia namory mpanao gazety izy sy ireo depiote nanaiky hifanotrona aminy. Hetsika faharoa izany io taorian’ny fitatatany samy irery teny amin’ny haino aman-jery. Isan’ny depiote i Brunelle Razafitsiandraofa, depiote an’Ikongo. “Fantatrareo fa nametraka fitoriana mikasika ny anjara andraikitr’i Frantsa momba ny vono olona nisy tany Ikongo ny tenako” hoy ny depiote Razafitsiandraofa nanazava ny antony nanekeny ny antson’i Ratsima.
Isan’ny votoatin’ny fiantsoana ny mpaampita vaovao ny fiantsoana ny vahoaka ho avy ao amin’ny Live Hotel haneho ny heviny sy hanohana ny hetsika fandavana ny fanambaran’ny ambasadaoro. Ny alatsinainy 2 novambra no fotoana amin’ny 9 ora maraina.
Tonga ny andro nifanomezana Nipaika ny ora voatondro. Tena vitsy dia vitsy ireo namaly antso. Isan’ny nasaina manokana ireo filoham-pirenena mbola velon’aina. Nasaina izy ireo hilaza izay fantany momba ireo Nosy ireo ireo nandritra ny fitantanany ny tany sy fanjakana.
Tsy nisy tonga ireo filoham-pirenena. Lojika ihany koa izany. Tahaka ny DE (demande d’explication) ange ny fomba nampitana ny fangatahana fa tsy fanasana olona manan-kaja velively. Efa nampoizin’i James Ratsima ihany angamba fa tsisy filoham-pirenena hamaly ny antsony ka na ny seza ho azy ireo aza tsy tazana.
Taorian’ny teny fanokafana dia nanome fitenenana an’ireo olona vitsivitsy i James Ratsima. Teo ny solontenan’ny filoha Ratsiraka ary teo koa ny solontenan’ny filoha Zafy Albert. Ny kandida Harimanana Raniriarinosy no nitondra ny tenin’ny filoha Ratsiraka. Tabera Randriamanantsoa kosa no nitondra tenin’ny Filoha Zafy. Soritana fa tsy nampita hafatra an-tsoratra ireo filoha roa lahy ireo na dia heverina aza fa izany no tokony ho izy satria nampita hafatra ho an’ny vahoaka izy ireo. Raha ny fomba firesaka dia ny hevitr’ireo roa lahy ireo no tena nentiny fa tsy ny hafatry ny filoha soloiny tena akory.
Mbola nanamafy ny fanohanany kosa ny sasan’ny tamin’ireo depiote izay efa nanatrika ny valan-dresaka natao ho an’ny mpanao gazety isan’ireny ny depiote Mapar toa an’i Brunelle Razafitsiandraofa Brunelle (Ikongo). Tonga tao koa ny depitoe Ratsivalaka Michelle (Antananarivo 1) ary depiote Randrianasolo Dera Louis Charles (Antanifotsy) samy Mapar izy ireo. Tao ihany koa ny depiote Rambolamanana lany tany Betafo avy amin’ny lisitra Tim fa tsy Mapar araka ny fiheveran’ny maro azy.
Fa nisy koa ireo mpanao politika no hita nandritra ny valan-dresaka fa tsy tonga nanohina ny antso ny alatsinainy. Isan’ireny i Andrianjaka Rajaonah, mpitarika ny antoko Otrikafo.
Tonga tsikelikely ihany kosa ny olona. Isan’ny tonga namaly antso ny ministra teo aloha toa an’i Organes Randriamihantarizaka sy Alain Andriamiseza. Tazana tao koa ireo Cst teo aloha toa an’i Alain Ramaroson sy Rasolofo René. Hita tao ihany koa ireo mpikambana sasany amin’ilay fikambanana antsoina hoe “Comité National pour la Restitution des Iles Eparses et pour la Revendication du Plateau Continental” (CNRIE-RPC) ny 15 septambra 2014.izay nanokan-tena hitaky ireo nosy antsoina hoe Iles Eparses ireo.
Isan’ny fanamarihana azo aroso koa dia tsy nisy sora-baventy na banderole tao amin’io efitrano lehibe io na teny ivelany. Efa fomba mahazatra tokoa ny mahita sora-baventy raha vao misy famoriam-bahoaka.
Nifarana tsy nisy hevitra tapaka mazava ny hetsika notarihan’i James Ratsima io alatsinainy 2 novambra io. Tsy nisy ny fotoana ifanomezana fa hidina an-dalambe. Andro fahatsiarovana ny maty ho an’ny Fiangonana Katolika. Dia homaty ankaranany ve nyhetsika sa tsy ampy ny loharanom-bola hanohizana azy ? Izay ve no dikan’ilay tsy fisian’ny banderole ?
Marihina fa eo amin’ny tambazotra serasera toa ny facebook i James Ratsima no hita ho manohy ny ezaka fanairana. Isan’ny hambarany ao ny fisian’ny fandotoana ny tontolo iainana ataon’ny frantsay ao amin’ireo Nosy ireo (pollution marine).
“Dia ahoana koa re ny manaraka…” hoy ny tononkiran’ny sôva iray. Dia ho hita eo ny tohiny fa ny azo ambara dia mbola mitory teny irery aloha no azo ilazana an’i James Ratsima. Sanatria tsy manao tsinontsinona an’ireo namaly ny antsony akory raha milaza izany. Tsia. Olona manana ny hajany ireo namaly antso saingy mbola tsangan’olona izy ireny ary mbola tsy afaka nanetsika ny fanjakana ny ezaka nataon’i James Ratsima. Na tiana anefa na tsy tiana dia tsy maintsy solontenam-panjakana no ifampiresaka amin’i Frantsa amin’izao raharaha izao. Naa ho aiza na ho aiza no htiondrana ny dingana manaraka. “Deraina” ireo efa nihetsika ary ankaherezina hatrany mba tsy ho kivy ambony ihany. Miankina amin’izy ireo ny valin’ny : “Dia ahoana koa re ny manaraka…”.